အင်ဂျင်ဝိုင်အကြောင်းနဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်ဘယ်လိုလဲမလဲ ? - Myanmar Automobile and Equipment Directory
အင်ဂျင်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပေါက်ကွဲမှုမှ ထွက်လာတတ်လေ့ရှိတဲ့ ပအညစ်အကြေးများဖြစ်တဲ့ ဆီလီကွန်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ အက်ဆက်များကို ဆီအတွင်းပျော်ဝင်စေပြီး အင်ဂျင်အတွင်းအခန်းတွင်းကနေ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဒီအပြင် အင်ဂျင် စုပ်ယူသည့်လေတွင် ပါလာတဲ့ ဖုန်စ မျှင်မျှင်လေးများကိုလည်း ရှင်းလင်းပေးပါတယ်။
တစ်ဖက်က သန့်ရှင်းမှု ဖြစ်စေတဲ့အပြင် အခြား တစ်ဖက်ကလည်း သူကိုယ်တိုင် ချေးအဖြစ် ချိုးကပ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ဝိုင်အတွင်း ပါဝင်နေတဲ့ ဓာတု ပစ္စည်း အချို့ဟာ အင်ဂျင် အတွင်းခန်းထဲက မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်ကြောင့် ပြိုကွဲပြီး ညှိမည်းမည်း များအနေနဲ့ အင်ဂျင် အသားမှ တွယ်ကပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းများမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်များမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
အင်ဂျင် ၀ိုင်ကို ထုတ်လုပ်ပုံအရ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ ရေနံမှ ထုတ်ယူတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ပြီး Mineral ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ပြီး Synthetic အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မျိုးကို ရောစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဟာကိုတော့ Premium အမျိုးအစားလိုခေါ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်ဝိုင်အဟောင်းကို ဖောက်ချပြီး အသစ်လဲတဲ့အခါ အဟောင်းကို ဖောက်ထုတ်ပြီးချိန်မှာ အင်ဂျင်အတွင်းကို ဆေးကြောဖို့အတွက် သီးသန့်ထုတ်ပေးထားတဲ့ အင်ဂျင်ဝိ်ုင်ရှိပါတယ်။ Flushing oils လို့ခေါ်ပါတယ်။ 0W/20 လို့လည်း လူသိများပါတယ်။ သူက အင်ဂျင်ဝိုင်မျိုးနွယ်ဖြစ်ပေမဲ့ အင်ဂျင်ဆေးဖို့အတွက်သာဖြစ်ပြီး ကားမောင်းနှင်တဲ့အခါမှာ သုံးလို့မရပါဘူး။
လဲမဲ့ ဆီအဟောင်းကို ဖောက်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ ဆေးကြောဆီကို ဖြည့်ပြီး ကားစက်ကို မီနစ် (၂၀) ခန့် နှိုးထားရပါတယ်။ ပြီးမှ စက်သတ်ပြီး ဆေးကြောဆီကို ဖောက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် ဆီမှာ ချေးတွေ ပါလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဆီစစ်အဟောင်းကို အသစ်ဖြင့် လဲပြီး ဆီအသစ်ကို ထည့်ရပါမယ်။
ဆေးကြောဆီအစား ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက် ထုတ်ထားသော အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြင့်လည်း ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်။ အကုန်အကျ ချွေတာလိုရင် ဒီဇယ်ဆီဖြင့် ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးကြောဆီလောက် ထိရောက်မှု ရှိမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆီအသစ်လဲပြီးတဲ့အခါ မိုင်တစ်ရာခန့်မောင်းပြီးချိန်မှာ ဆီရဲ့ မူလအရောင်ဖြစ်တဲ့ ရွှေအိုရောင်ကနေ မည်းညစ်အရောင်ကို ပြောင်းသွားရင် တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့။ ထည့်လိုက်တဲ့ အင်ဂျင် ၀ိုင်က သူလုပ်၇မဲ့ သန့်ရှင်းရေးအလုပ်ကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်တာကြောင့် အခုလို အရောင်ပြောင်းတာလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။အရောင်မပြောင်းရင်သာ ပြသနာလို ယူဆရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆီအရောင်ပြောင်းတိုင်းသာ ဆီအသစ်လဲနေရရင် မွဲဖို့သာရှိပါတယ်။
ဆီလဲတိုင်းဆီစစ်ကိုလည်း လဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ဝိုင်က အင်ဂျင်ထဲက အညစ်အကြေားများကို သယ်ထုတ်လာပြီး ဆီစစ်ကို ဖြတ်ပါတယ်။. ဆီစစ်က အညစ်အကြေားများကို တတ်နိုင်သမျှစစ်ယူထားပါတယ်။ တကယ်လို ဆီကိုသာလဲပြီး ဆီစစ်ကို မလဲပါက အညစ်အကြေးတွေကို ဆီအသစ်တွေက ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီစစ်က ဆီကို သန့်အောင် ပြုပေးရမဲ့အစား ဆီအသစ်ဖြင့် ဆီစစ်အဟောင်းကို သန့်အောင် ဆေးပေးနေသလို ဖြစ်ပါတယ်။ဆီလတြဲ့အခါ ဆီဖြည့်လိုက် တိုင်းလိုက်လုပ်ပြီး စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် ဖြည့်ရန် လိုပါတယ်။ ဆီတိုင်းတံမှာ ပြသထားတဲ့ အမြင့်ဆုံးအမှတ်အသားထက် မကျော်စေရန် ဂရုစိုက်ပါ။ မလောပါနဲ့။
ကားဟာ ရေပြင်ညီအတိုင်းရပ်ထားရပါမယ်။ ဖြစ်စေချင်တာကတော့ အင်ဂျင် အောက်ခံခွက်ဟာ ရေပြင်ညီအတိုင်းရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားစက်သည် အေးနေရပါမယ်။ စက်သတ်ထားတာ တော်တော်လေးကြာမှာ တိုင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်မှသာ အပေါ်ကို တက်နေတဲ့ ဆီများ အောက်ခံခွက်ထဲ ပြန်ရောက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီပမာဏအမှန်ကို တိုင်းတာ သိရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီပိုလျှံသွားပါက စက်နှိုးတဲ့အခါ ဆီပန့်က ဆီကို ဆွဲယူပြီး တွန်းတင်ပေးပါတယ်။ အဒြီအခါ ဆီပမာဏက များနေသဖြင့် ဖိအား ပိုပါတယ်။ ၀ိုင်ဆီးများကို သွားဆောင့်ပါတော့တယ်။ ပန်ကာပူလီဘက်မှ ၀ိုင်ဆီးထိခိုက်သွားရင် အပြင်ကို ဆီစိမ့်ယိုနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီယာအုံနဲ့ တွဲထားသော နေရာရှိ ၀ိုင်ဆီးများကိုလည်း ဆောင့်ပါတယ်။တကယ်လို ၀ိုင်ဆီး ထိခိုင်သွားရင် ဂီယာအုံဆီကို အင်ဂျင်ဝိုင်များ ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကလပ်ပလိတ်ကို ဆီဆွတ်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး ကလပ်ချော်တတ်ပါတယ်။
အောက်ခံခွက်ရဲ့ ဆီအမြင့်ဆုံးနေရာသည် ကရိုင်းရှပ်နဲ့ အလွန်နီးကပ်နေပါတယ်။ ဆီပိုလျှံတဲ့အခါ ကရိုင်းရှပ်က ဆီထဲ မမြုပ်တစ်မြုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ စက်လည်တဲ့အခါ ရှပ်က လည်ပြီး ဆီကို လှုပ်ပေးပြီး အမြုပ်ထစေပါတယ်။ ကော်ဖီကို ဇွန်းနဲ့ ခလောက်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ အမြုပ်ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လေပူစီပေါင်းကလေးများ ဆီထဲရောက်ကုန်ပါတယ်။ အင်ဂျင်တွင် လေပွနေသလို ဖြစ်ရင်မကောင်းပါ။ ဘယ်ရင်ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ စက်ပူလာတဲ့အခါ ဆီညော်န့ထွက်တတ်ပါတယ်။ ပစ်စတင်ရင်းများကိုပါ ထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။ လေပွဆီဟာ လေရဲ့ အကူအညီနဲ့ အင်ဂျင်အတွင်းခန်းကို စိမ့်ဝင်ပြီး ကားအိတ်ဇောမှ ထွက်တဲ့ မီးခိုးနဲ့အတူ ပါသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီတိုင်းတံရဲ့ အနိမ့်ဆုံး L အမှတ်ထက် နည်းနည်းပါးပါး ကျော်ရုံမျှ ထည့်ပေးသင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီဇယ်အင်ဂျင် အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွင် မသုံးရပါဘူး။
ဒီလိုပဲ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှာ မသုံးရပါဘူး။ ဒီဇယ် အင်ဂျင်ဟာ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထက် ဖိအားပိုများပါတယ်။ ပိုလည်း ပူပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကို ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေဟာ အညစ်အကြေး ပိုထွက်လေ့ရှိတာကြောင့် သူအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်မှာ ကြေးချွတ်ဆေးများကို ထည့်ပေးထားလေ့ရှိတာ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်ဝိုင်လဲတဲ့အခါ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ရမဲ့ အဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁- ဆီဖောက်လဲရန်အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာများ အားလုံးကို အသင့်ရှိအောင် လုပ်ထားပါ။
၂- အသစ်တပ်ဆင်မဲ့ ဆီစစ်ထဲကို အင်ဂျင်ဝိုင် အသစ်ကို လောင်းဖြည့်ပါ။ အတွင်းမှ ဆီစစ်စက္ကူဆီဝအောင် စုပ်ဖို့ ထားထားလိုက်ပါ။
၃- စက်နိူးပါ။ ၅ မိနစ်ဝန်းကျင် နိူးထားပြီးမှ စက်သတ်ပါ။ ဆီနွှေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီနွှေးနေမှ ဆီအစီးသွက်ပါတယ်။
၄- ၁၀မိနစ်စောင့်ပါ။ ဆီနွှေးစဉ်ဆီများ အပေါ်တက်သွားပါတယ်။ အောက် ပြန်ရောက်အောင် စောင့်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၅- ဆီတိုင်းတံကို နှုတ်ယူထားပါ. လေလုံနေရင် လေဟာနယ် ဖြစ်ပြီး ဆီအဆင်းနှေးစေပါတယ်။ ဆီဖြည့်တဲ့ အဖုံးကိုလည်း ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။ အ၀တ်စသန့်သန့်ကို ဖွဖွလုံးပြီး အပေါက်ကို ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါ။
၆- ဆီဖောက်ထုတ်တဲ့ အပေါက်အောက်တွင် ဆီခဲမဲ့ ဇလားကို နေရာချပါ။ ပုံးဖြင့် ခံလိုက်ရင် ကတော့ အ၀ကျယ်ကျယ် ဖြင့် တစ်ဆင့်ခံပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
၇- ဆီဖောက်ထုတ်တဲ့ အပေါက်ကို လက်ချောင်းဖြင့် လှည့်သာတဲ့အထိ ခွဖြင့် လှည့်ပြီး ချောင်လိုက်ပါ. လက်ချောင်းဖြင့် ဖြည်းဖြည်းလှည့်ဖွင့်ပြီး အဆို့ကို ဖယ်လိုက်ပါ.
၈-ဆီမည်းမည်းများစီးကျလာပြီး အားလုံးကုန်တဲ့အထိ စောင့်ပါ။
၉-အဆို့ပလပ်မှ ၀ါရှာအခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။ စိတ်မချရင် အသစ်လဲပါ။ လက်ဖြင့်လှည့်ပြီး အဆို့ကို ပြန်တပ်ပါ။ ကျပ်သွားတဲ့အခါ ဂွကို အသုံးပြုပြီး ထပ်ကြပ်ပါ။ တစ်အားကြီး မကြပ်ပါနဲ့။ အရစ်ပြုန်းတတ်ပါတယ်။
၁၀- ဆီစစ်ဖြုတ်တဲ့ကရိယာနဲ့ ဆီစစ်ကို လှည့်ဖြုတ်ပါ။ ချောင်သွားတဲ့အခါ လက်ဖြင့် လှည့်ပြီး ဆက်ဖြုတ်ပါ။ တပ်ဆင်တဲ့ နေရာတစ်ဝိုက်ရှိ ဆီအဟောင်းများကို အ၀တ်စုတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။
၁၁-ဆီဖြည့်ထားတဲ့ ဆီစစ်အသစ်ထဲမှ ဆီများကို အင်ဂျင်ရဲ့ ဆီဖြည့်ပေါက်ထဲကို လောင်းထည့်ပါ။ ပြီးနောက် ဆီစစ်အသစ်ကို တပ်ပါ။
၁၂- ဆီခံထားတဲ့ ဇလားကို ဖယ်ပါ။ အဆိ်ု့တစ်ဝိုက်ပေကျံနေတဲ့ ဆီများကို အ၀တ်ဖြင့် သုတ်ပါ။
၁၄-ဆီထည့်ပေါက်မှ ဆီလောင်ထည့်ပါ။ အဖုံးပြန်ဖုံးပါ။
၁၅- ၁၀ မိနစ်အကြာတွင် ဆီတိုင်းကြည့်ပါ။ လိုနေရင် ထပ်ဖြည့်ပါ။ ပိုနေရင် ပြန်ဖောက်ချပါ။
၁၆-စက်ကို နိူးလိုက်ပြီး ဒက်ရှ် ဘုတ်မှ ဆီကရား သင်္ကေတ မီးလင်းနေရာမှ မှိတ်သွားရင် စက်သတ်ပါ။
ခဏစောင့်ပြီးမှ စက်ပြန်နိူးပါ။ ၅ မိနစ်ခန့် ဆက်တိုက်နိူးထားပါ။ စက်ပြန်သတ်ပြီးရင် ဆီလဲခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။